Kitapo solosaina finday China ho an'ny fanamboarana sy fanamboarana dia | Kinghow
Kitapom-batsy laptop, Travel Business Anti Fangalarana solosaina finday maharitra kitapo kitapo misy USB Charging Port, kitapo solosaina an-tsekoly an-tsekoly an-tsekoly an-tsekoly ho an'ny vehivavy sy lehilahy
Toerana fitahirizana sy paosy: kompana finday iray misaraka no mitazona Laptop 15.6 Inch ary koa 15 Inch, 14 Inch ary 13 Inch Macbook / Laptop. Efitra malalaka iray fonosana malalaka ho an'ny iPad, totozy, charger, mpamatsy boky, boky, akanjo, sns. eo akaikin'ny tavoahangy rano sy elo kely, araraoty ny entanao ary mora hita.
COMFY & STURDY: famolavolana rivotra miorina amin'ny alàlan'ny fantsom-baravarankely matevina nefa malefaka, manome anao tohana farany ambony. Ny fehin-tsoroka azo sintomina sy azo ovaina dia manamaivana ny adin-tsoroka. Tavoahangy vita amin'ny tampony vita amin'ny fefy mandritra ny fotoana maharitra
FUNCTIONAL & SAFE: Ny fehin-kibo dia mamela ny kitapom-batsy hidina amin'ny valizy / valizy, hikorisa ny fantsom-bokatra mahitsy ho an'ny mora entina. Ampiasao amin'ny paosin'ny anti-halatra miafina any aoriana ny entana sarobidy aminao amin'ny mpangalatra. manao ny dianao sy mandeha mora kokoa amin'izay alehanao.
USB PORT DESIGN: Miaraka amina charger USB any ivelany ary miorina amin'ny tariby famandrihana ao anatiny, ity kitapo kitapo usb ity dia manome anao fomba mety kokoa handoavana ny findainao rehefa mandeha ianao. Headphone Jack: afaka mihaino ny mozika ankafizinao ianao rehefa mandeha maimaim-poana.
FITAOVANA MATERIAL & SOLID: vita amin'ny lamba mahazaka polyester mahatohitra sy maharitra amin'ny alàlan'ny zipper vy. Ataovy azo antoka ny fampiasana azo antoka sy maharitra isan'andro sy faran'ny herinandro. Manompoa anao tsara ho toy ny kitapo asa any amin'ny birao, kitapo USB kely famenoana entana, tonga lafatra amin'ny dia lavitra ataon'ny orinasa, fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro, fiantsenana & hetsika ivelany amin'ny fiainana andavanandro. Fanomezana tsara ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa eny amin'ny oniversite ho an'ny zazalahy, zazavavy, tanora, olon-dehibe
kitapo kitapo orinasa
Black Unisex Cool Travel Laptop tsy mahazaka rano Scho ...